Tag: auction ads | Martech Zone
Mgbe m na-agụ saịtị John Chow, echefuru m na m debanyere aha AuctionAds mana etinyeghị koodu ahụ na saịtị m. N'abalị a, m gbakwunyere koodu na otu posts m n'etiti ọdịnaya post na ngalaba nkọwa. Ana m atụ anya ịhụ ka ha si eme. AuctionAds nwere njirimara mara mma ebe ị nwere ike ịkọwapụta isiokwu ndị ịchọrọ ịmasị mgbasa ozi. Kama ịchọta ụfọdụ ndị nkịtị maka